Ciidamada AMISOM oo la wareegay amaanka magaalada Baydhabo
August 10, 2012 - Written by Baydhabo:-Cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa maanta waxaa ay kala wareegeen ciidamada Itoobiya ee heysta magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay xarumihii ay deganaayeen ciidamada Itoobiya ka dib markii ciidamo ka tirsan AMISOM oo gaaraya 1000 askari la geeyey magaalada Baydhabo.
Ciidamadan AMISOM ayaa sheegay in ay amaanka magaalada Baydhabo ay la wareegeen waxaana isbuucaan oo dhan lagu daadgureynayey ciidamada ka tirsan Ugandha iyo Burundi magaalada Baydhabo.
Sarkaal ka tirsan Midowga Afrika ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo gaaraya 2500 la kala geyn doono magaalooyika Baydhabo iyo Baladweyne iyaga oo kala wareegaya amaan magaalooyinkaas ciidamada Itoobiya.
Ciidamada AMISOM ayaa haatan waxay ku sugan yihiin oo dagaalo ku qabsadeen magaalada Muqdisho, deegaano ka mid ah gobolada Shabeelooyinka, Hiiraan, Jubada Hoose iyo Gedo, ilaa haatan si rasmi ah looma oga tirada rasmiga ah ee ciidamada AMISOM.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan iyaga oo doonaya in ay magaalada ka baxaan lama yaqaan halka ay u jiheysan doonaan.